PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-03-25 - Sesibalwa neziyigugu isizinda SEZCC
Sesibalwa neziyigugu isizinda SEZCC
Ilanga langeSonto - 2018-03-25 - Izindaba - KNOWLEDGE SIMELANE
ISIZINDA sebandla i-zulu Congregational Church emthwalume, ogwini oluseningizimu yekwazulu-natal, okuyibandla elasungulwa eminyakeni engama-122 eyedlule sesihlonzwe njengenye yezindawo ezinomlando oyigugu nguhulumeni wakwazulu-natal.
Ngolwesithathu kwembulwe itshe elilotshwe amagama abaholi baleli bandla emcimbini obuhanjelwe yizinkumbi zabantu egobhela, okubalwa kubo izimeya, amakhosi abefundisi kanye nabamele uhulumeni wesifundazwe.
Lo mcimbi ubuholwa ngumengameli webandla umbhishobhi Sithembiso Hlophe oku- nguye olande umlando webandla.
Umbhishobhi Hlophe uthe kwaba nzima ezikhathini zokusungulwa kwaleli bandla, elasungulwa ngumfu Sbungu Shibe owayephume kubelungu bezimishini basemelika.
“Sabe sibizwa ngokuthi siyiAmerican Zulu Congregational Church kodwa umfu Shibe nama- doda ayenawo ngaleso sikhathi zingama-21 kundasa (March) we-1896 basusa u-american kwaba yizulu Congregational Church ZCC.
“Kwake kwaba nombango kwavalwa indlu yesonto emkhambathini ngasemgungundlovu kepha kuthiwa kwathandazwa kakhulu yagcina ivuliwe leyo ndlu.
“Namuhla sizobonga bonke laba baholi abalibamba ivangeli, sekuze kwathi nohulumeni wethu wabona ukuthi le ndawo ayibe ngenye yeziyigugu,” kubeka umfu Hlophe.
Umphathisikhwama webandla umnu Sandile Dlamini nguye ochaze inhloso yokuhlangana, wathi beyibandla baya ehhovisini likandunankulu wesifundazwe becela ukuba kuhlonishwe ibandla ngale ndlela.
“Abasinikanga nencane inkinga njengoba nibona zonke izinto sezimi ngomumo.
Siyabonga kakhulu kuhulumeni wakithi oholwa ngumnu Willies Mchunu,” kuphetha umnu Dlamini.
ISITHOMBE NGU: KNOWLEDGE SIMELANE
UMBHISHOBHI Sithembiso Hlophe (okwesobunxele) ofake isigqoko esiwumbhoshongo, kanye namalunga aqavile EZCC ngesikhathi kuvulwa itshe lesikhumbuzo sebandla egobhela, emthwalume, ogwini oluseningizimu yekwazulu-natal ngolwesithathu.